emisha - Geofumadas
Innovations mayelana ne-software ye-CAD. Izinto ezintsha emklamo we-3d
I-Fuzzy Logic Robotics
Kusuka ekwakhiweni kwe-CAD ukulawula nge-software eyodwa i-Fuzzy Logic Robotics imemezela ukwethulwa kwenguqulo yokuqala ye-Fuzzy Studio ™ eHannover Messe Industry 2021, ezokhomba ushintsho ekukhiqizeni i-robotic eguquguqukayo. ➔ Ukuhudula bese uphonsa izingxenye ze-CAD kumawele akho e-3D edijithali akhiqiza ...
Ubunginiyela, Innovations, eziningana
Ingxoxo yeGeofumadas eSingapore no-Eric Chong, uMongameli kanye ne-CEO, i-Siemens Ltd. Ngabe i-Nokia ikwenza kanjani kube lula ukuthi umhlaba ube namadolobha ahlakaniphile? Yimiphi iminikelo yakho ephezulu evumela lokhu? Amadolobha abhekene nezinselelo ngenxa yezinguquko ezilethwe yimibono ethile yokufuduka kwabantu emadolobheni, ukuguquka kwesimo sezulu, ukuhwebelana kwembulunga yonke kanye nobuningi babantu. Kukho konke ukubanzima kwabo, bakhiqiza ...
Ingxenye yalabo abafunda le ndatshana bazalwa benobuchwepheshe ezandleni zabo, bejwayele ukuguqulwa kwedijithali njengokunikeziwe. Kwesinye isigamu yithina esibonile ukuthi iminyaka yolwazi ifike kanjani ngaphandle kokucela imvume; ukukhahlela umnyango siguqule esikwenze kwaba izincwadi, iphepha noma ama-terminals akudala e ...
IGeofumadas imboze mathupha izinsuku ezintathu ze-15th gvSIG International Conference eValencia. Ngosuku lwesibili, izikhathi zahlukaniswa zaba ngamabhulokhi amane njengosuku olwedlule, kuqalwa nge-gvSIG Desktop, lapha kwavezwa konke okuphathelene nezindaba nokuhlanganiswa kohlelo. Izipikha zebhulokhi yokuqala, ...